Jamie Carragher oo ka aragti dhiibtay qaladaadka Kepa Arrizabalaga ee kooxda Chelsea – Gool FM
(England) 21 Sebt 2020. Halyeeyga kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa muujiyay dareenkiisa ku aadan goolhayaha reer Spain ee Kepa Arrizabalaga, kaasoo qaladaadkiisii ​​musiibada ahaa ka sii wado naadiga Chelsea.
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa sii wadata guulaheeda xiriirka ah ee horyaalka, waxaana ay ku garaacday Chelsea oo laga qaatay kaarka cas 0-2, taasoo ku ciyaaraysay 10 ciyaaryahan, waxaana goolasha Reds u dhaliyay Sadio Mane.
Wargeyska “Daily Mail” ayaa daabacay hadalada Jamie Carragher kaddib markii uu ka aragti dhiibtay goolhayaha reer Spain ee Kepa Arrizabalaga, wuxuuna yiri:
“Ciyaaryahan ahaan, waxaad galeysaa waqtiyo adag, Kepa-na wuxuu hada marayaa mid ka mid ah daqiiqadahaas”.
“Waxaad dareemeysaa heer aad isaga u qoomameyso, wuxuu ku nool yahay daqiiqado sida riyo xun ah”.
Waxaa lagu soo waramayaa in Chelsea ay ku dhowdahay inay si rasmi ah u shaaciso heshiiska goolhaayaha kooxda Rennais ee Edouard Mendy, waxayna wararku tilmaamayaan in heshiiska marhore la soo gabagabeeyay.